မြင်းမူ ကျောင်းပန္နက်ချပွဲ – ၀ီရသူ
နတ်တော်လဆန်း(၃)ရက် (၁၀.၁၂.၂၀၁၈) စစ်ကိုင်းတိုင်း မြင်းမူမြို့ရေဝန်မင်းသားကျောင်းမှာ ကျင်းပပါတယ်။
ရေဝန်မင်းသား သာမဏေကျော် စာသင်တိုက်ဖွင့်လှစ်နိုင်ဖို့အတွက် နှစ်ထပ်ကျောင်းဆောင် စတင် ဆောက်လုပ် တာပါ။ ကျောင်းဒါယကာ ဒါယိကာမများကတော့ဓမ္မာရုံ အလှူရှင်တွေပါပဲ စစ်ကိုင်းမြို့မှာနေပါတယ်။ သံဃာတော် များက ကမ္မဝါရွတ်ဖတ်ပြီး မြေသန့်မင်္ဂလာပြုလုပ်ကာ ဇယန္တောဗောဓိယာမူလေ အောင်ဂါထာ ရွတ်ဆို နေချိန်မှာ ဒကာများက ပန္နက် ရိုက်ကြတာပါ။
ရေဝန်မင်းသား ဆရာတော်ကြီးက ကိုရင်မရှိ ကျောင်းသားမရှိ ဥဇင်းမရှိဘဲ တစ်ပါးတည်း နေထိုင်လာရမှ သာမဏေကျော် စာသင်တိုက် ဖွင့်ချင်လို့ စာရေးသူကို လာရောက် အကူညီတောင်းတဲ့အခါ စာရေးသူက ပဲခူးမြို့ သာမဏေကျော် စာသင်တိုက် ဆရာတော်တွေ့နဲ့ ချိတ်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။
ကျောင်းဆောင်ပြီးမြောက်တဲ့အခါ ပဲခူးသာမဏေကျော် ဆရာတော်ကြီး၏ တပည့်(၂)ပါး ကျောင်းထိုင် စာချမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သာမဏငယ်လေးများ လက်ခံပြီး သာမဏေကျော်များ ပေါ်ထွန်းအောင် မွေးထုတ်ပေးကြမှာ ပါ။ ရေဝန်မင်းသားဆရာတော်ကြီး ကျန်းမာစွာ စာသင်တိုက်ကြီးကို အောင်မြင်ပြီးမြောက်တဲ့အထိ ဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေ ဘုရား……….
နတျတျောလဆနျး(၃)ရကျ (၁၀.၁၂.၂၀၁၈) စဈကိုငျးတိုငျး မွငျးမူမွို့ရဝေနျမငျးသားကြောငျးမှာ ကငျြးပပါတယျ။
ရဝေနျမငျးသား သာမဏကြေျော စာသငျတိုကျဖှငျ့လှဈနိုငျဖို့အတှကျ နှဈထပျကြောငျးဆောငျ စတငျ ဆောကျလုပျ တာပါ။ ကြောငျးဒါယကာ ဒါယိကာမမြားကတော့ ဓမ်မာရုံ အလှူရှငျတှပေါပဲ စဈကိုငျးမွို့မှာနပေါတယျ။ သံဃာတျော မြားက ကမ်မဝါရှတျဖတျပွီး မွသေနျ့မင်ျဂလာပွုလုပျကာ ဇယန်တောဗောဓိယာမူလေ အောငျဂါထာ ရှတျဆို နခြေိနျမှာ ဒကာမြားက ပန်နကျ ရိုကျကွတာပါ။
ရဝေနျမငျးသား ဆရာတျောကွီးက ကိုရငျမရှိ ကြောငျးသားမရှိ ဥဇငျးမရှိဘဲ တဈပါးတညျး နထေိုငျလာရမှ သာမဏကြေျော စာသငျတိုကျ ဖှငျ့ခငျြလို့ စာရေးသူကို လာရောကျ အကူညီတောငျးတဲ့အခါ စာရေးသူက ပဲခူးမွို့ သာမဏကြေျော စာသငျတိုကျ ဆရာတျောတှနေဲ့ ခြိတျဆကျပေးခဲ့တာပါ။
ကြောငျးဆောငျပွီးမွောကျတဲ့အခါ ပဲခူးသာမဏကြေျော ဆရာတျောကွီး၏ တပညျ့(၂)ပါး ကြောငျးထိုငျ စာခမြှာ ဖွဈပါတယျ။ သာမဏငယျလေးမြား လကျခံပွီး သာမဏကြေျောမြား ပျေါထှနျးအောငျ မှေးထုတျပေးကွမှာ ပါ။
ရဝေနျမငျးသားဆရာတျောကွီး ကနျြးမာစှာ စာသငျတိုကျကွီးကို အောငျမွငျပွီးမွောကျတဲ့အထိ ဆောငျရှကျနိုငျပါစေ ဘုရား……….
ကရင်ပြည်နယ် မဘသ သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်
အမျိုးသားရေးကို ဖိနှိပ်လာတဲ့အခါမှာလည်း ဥပဒေဘောင်ထဲကပဲ ဖိနှိပ်မှုကို တွန်းလှန်ကြပါ(၂)